Uncategorized | tokkumma Uncategorized – tokkumma
Nesrdin Hadji on Newsweek II Feyisa Lilesa: Oro…
Nesrdin Hadji on …
April 26, 2018 Nesrdin Hadji Leave a comment
Yeroo darbe dubbii Biiroo Gumuruuk keessatti hojjetamaa jirtu takka gurra siin gaheen ture. Hojjettotni Gumurukaa damee gurgurdaa irra hojjataa turan,guyyaa san kan sitti himee ture (Namootni sagal) Sun hunduu High tax payer branch irraa gara Head quarter kan magganaanyaatti argamutti jijjiiramaniiru. Namoota sagal kana keessaa 6 dhalattoota Tigiray yoo ta’an, 3 qofatu saboota biroodha. Dubbiin gaarii ta’uu hin malttu. Sababni isaas, hooggansi haaraan(Umar Hussen) filatamee Itti gaafatamaa gumuruuk ta’uuf yoo guyyaan tokko hafu kan yaada kana kaasanii akka isaan achitti jijjiiraman kan godhan.Isaan kun marti warra akka gaariitti keessattuu daldaltoota Oromoo rakkisaa fi saamanii duroomanidha. Hundaa hundatti garuu Har’a xumuranii bahanii jiru. Yoo dhugaa jiru ilaaltte garuu bakki isaan amma itti jijjiiramaa jiran kun kan hojjii baay’een hin jirreedha. Bakki isaan gadhiisanii bahan garuu hojjii baay’een kan jiruufi dabalata humna namaa iyyuu kan barbaachisudha. Kunis Jarri achitti wal-sassaabun isaanii Mission wayii akka qaban agarsiisa.Hundaafuu mee gurra uummataatiin naaf gahi.”
February 11, 2018 Nesrdin Hadji Leave a comment
“Akkuma bekamuu Duullii Hojii Dhaabuu Guyyaa sadiif Boru kaassee akka itti fufu Qeerroo Oromiyaa Labseeraa Akkuma kan hin guudan Finfinnee irraatti hojatamuu qaba
kanafi imoo irraa caalaa Qeerroo
Bishoftuu fi kan biros
Konkoloota tokko gara finfinnee akka hin seenee fi akka hin baanne gochuun finfinnee guutuuman guutuutti dhabuu hin dandeenya
Dabalaattis Qeerroo Finfinnee keessaa jirta bakka jirtaa kaamiittu Guyyaa boru kaasse hanga robiitti iddoo jirutti Duulla Hojii dhaabuu hojii irraa olchuu qaban”
December 30, 2017 Nesrdin Hadji Leave a comment
Wunderschön! Wenn Menschen so miteinander umgehen würden, wäre die Welt ein besserer Ort …
Jawar Mohammed irraa
“Guyyaa Muddee 19 fi 20/2010 Aanaa Miidhagaa Lolaatti duula Araddoota 6’n Zoonii Mulluu fi 12’n erer gamaa wal qunnamsiisuuf godhameen Araaddoonni 18 walitti banuudhaan loltoota Abdi illee laga Erer keessa qubatanii jirani fi ummata keenya rakkisaa turte guutumatti erer keessaa buqqasaniiru. Araddoota waggoota 10 oliif Liyyuu Poolisiidhaan addaan muramtee turte injifannoo galmoofteen daandiin walitti baasuun danda’ameera. Dabalataan Kilaash 4 fi Alaabaa Abdi illee 3 boojinee jirra.”
December 27, 2017 Nesrdin Hadji Leave a comment
#Hiriira Mormii Godina Horroo Guduruu Wallaggaa/Fincaa’aa!!
“Hara’a Hiriira Mormii guddaatu godina Horroo Guduruu Wallaggaa Magaalaa Fincaa’aatti gaggeeffamaa oole.Gaaffiin hiriirtoota kanaas ;-
1.Ajjechaa dangaa Oromiyyya irratti Uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru nurraa haa dhaabbatu.
2.Hooggnatoonnii fi Hidhamitoonni Siyaasaa oromoo haalduree tokko malee hatattamaan haa gadhiifaman
3.Oromiyaan bilisummaa ishii gonfachuu qabdi.
4.OPDO yaada dulloomaa qabdutti hinbullu.OPDO’n haaroomte nuu haa bulchitu.
5.Namoonni baratan akka nuu bulchan barbaanna.
6.Qondaaltoonni Hattuu sukkaaraa TPLF seeraatti haa dhiyaatan.Kana booda isaan jalattis bitamuu hinbarbaannu.
7.Bulchiisni Fedaralizimii dhugaa hojiirra ooluu qaba.
Qabsoon itti fufa!!”
#OduuAmmee #PrezidaantLammaa #BaqqalaaGarbaa Hoogganoonni Oromiyaa, prezidaanti Lammaa fi Dr. Abiyyi dabalatee, guyyaa boruu mana murtiitti dhiyaachuudhaan ob. Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoota biraaf ragaa akka bayan beekameera. Kuni tankaarfii sirriiti. Kuni tankaarfii gootummaati. Ol’aantummaa seeraa kabajuu fi kabajsiisuu keessattis murteen isaanii hiikkaa guddaa qaba. #OromoonIsinWaliinJira
#OduuAmmee #PrezidaantLammaa #BaqqalaaGarbaa
Hoogganoonni Oromiyaa, prezidaanti Lammaa fi Dr. Abiyyi dabalatee, guyyaa boruu mana murtiitti dhiyaachuudhaan ob. Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoota biraaf ragaa akka bayan beekameera. Kuni tankaarfii sirriiti. Kuni tankaarfii gootummaati. Ol’aantummaa seeraa kabajuu fi kabajsiisuu keessattis murteen isaanii hiikkaa guddaa qaba. #OromoonIsinWaliinJira
“Gursuum! Halli Aanaa kana keessaa deemaa jiru ulfaatadhaa. Gaafa guyyaa 12/04/10 ALI Makalakayyaan ooralii 5 ol ta’u halkan keessaa sa’a 9 irraa eegalee magaala Funyaan biraa maarsee bule. Ummaannis yoo lafti bariituu Makalakkaayyaan nurraa haa bahu jechun Waan mana qabu qabatee gara magaalatti dhufe. sanaan booda makalakayyaan magaala gadhiisee Mana barumsaa Kaasaa Oromiyyaa keessaa qubatee. Koraa bittineessaan keenyaas diddaa guddaa uumee ture. Jarri nun barbaachiisuu jechuudha. Guyya har’as waanti haaran dhagahamee innis koraa bittineessaan Gara Goodina haa galuu kan jedhu. Ummaannis koraa bittineessaa nurraa ka’u hin qabu jechuun hiriirii guddaan magaalaa F/biraa keessaatti gaggeefamee jira. Akka nutti fakkaatuutti bakka koraa bittineessaan gad dhisee kana makalakayyaa galchuuf fakkaata. Dinnee Didaa.. Diddaan furmaata! teenya oolumaa”